Gbasara Anyị | Cangzhou Kuntai Ngwaọrụ Ngwaọrụ Production Co., Ltd.
Flavoed Ball Valve
3 ụzọ Ball Valve
Hose Kpatụ Ball Valve
Ngwa a na-ejide
Igwe anaghị agba nchara / igwe ọsọ ọsọ
Idebe ihe ọcha
Odighi ihe ocha
Itarykpụrụ ịdị ọcha
Ntọala & Ọnọdụ
Site na etolite na 2010, Cangzhou Kuntai Metal Products Manufacturing Co., Ltd nwere aha ogologo oge maka ogo na mmeputa ohuru na imeputa SS valves na mmezi. Dị na Cangzhou, Hebei Province, nke dị nso na Xingang Port, Tianjin, na-enye anyị ọnọdụ okporo ụzọ dị mma.
Site na mbupụ ya karịa mba iri atọ, anyị arụpụtala ezigbo aha ndị ahịa na Europe, America, Middle East, South East Asia na mpaghara ndị ọzọ nke ụwa. N'ime afọ iri nke ahụmịhe anyị, anyị maara otu esi edozi nsogbu ọrụ maka ụlọ ọrụ ọ bụla, ebe anyị nwere otu ndị injinia raara onwe ha nye aka idozi nsogbu ọ bụla metụtara ngwa nke ụlọ ọrụ ọ bụla.
KUNTAI na-enye ọtụtụ ngwaahịa njikwa mmụba, gụnyere Ball Valve, Ọnụ Valzọ Ọnụ, Globe Valve, Lelee Valve, Y Strainer, Camlock / Ntinye ngwa ngwa, na ụdị akwa ọ bụla nke ejiri igwe anaghị agba nchara, ya na nnukwu ihe 304 / 304L / 316 / 316L, wdg Mgbe ị na-achọ SS valvụ & akwa mma na China dị elu, biko kwenye Kuntai ga-enye gị ihe ịtụnanya zuru oke.
A na-etinye ngwaahịa KUNTAI n'ọhịa metụtara mmanụ & gas, kemịkal & petro-chemical, ụlọ ọrụ nri, mmiri mmiri, ọgwụgwọ mmiri, ụlọ & ihe owuwu, ụlọ ọrụ ọkụ, ike ọkụ ọkụ, ọgwụ, teknụzụ, teknụzụ, akụrụngwa mmiri na mmiri ndị ọzọ.
KUNTAI kpuchitere mpaghara 17,000 square, na ndị ọrụ karịrị 200, na-eme 80000s kwa afọ.
Anyị nwere usoro arụmọrụ zuru oke, site na nhazi akpụ akpụ, ihe nkedo, iji igwe arụ ọrụ. N'ihe banyere teknụzụ, anyị nwere ikike R&D siri ike iji gboo mkpa pụrụ iche nke ndị ahịa ， dị ka olulu miri emi, oghere dị mgbagwoju anya, ọnọdụ ziri ezi, wdg.
Anyị enwetala asambodo njikwa sistemụ IS0 9001, Asambodo nke RoHS na asambodo CE, nke na-ekwupụta na ngwaahịa dị mma na ntozu oke.
KUNTAI bụ ụlọ ọrụ aka ya nke onye rụzuru rụzuru ya site n'ịgba mbọ na nraranye nke ndị ọrụ ya. Site na mmesi obi ike ịdị elu dị elu site na nyocha siri ike na usoro ọ bụla, anyị na-enye ụkpụrụ nke kachasị mma maka ngwaahịa maka ndị ahịa anyị niile na ndị ahịa n'ọdịnihu. N’ebe obula no n’uwa, n’agbanyeghi etu ihe choro si di ike, anyi n’ekwe nkwa ngwa ngwa n’oru gi. Anyi no ebe a!
Biko kpọtụrụ info@kuntaivalve.com maka ozi ndi ozo!
EGO0086-13393391989 / 0086-13333275819
ADANYAWang Jia Pu Xiang Yu Zhuang Zi Cun, Cang County, Cangzhou City, Hebei Province, China